Fikarohana momba ny firaisana Fandehanana an-tongotra Phenomena voafaritra sy fanavaozana vatana maty-Fampidirana - Fikarohana Reincarnation
Article by: Walter Semkiw
Ny fisehoan'ny fitsangatsanganana dia mamaritra ny fanahy iray izay maka vatana iray izay nirin'ny fanahy hafa teo aloha. Ny fitsangatsanganana dia efa noresahana nandritra ny famerenan-kira taloha, saingy iray monja Ian Stevenson Manamarina ny tranga an-tongotra miaraka amin'ny porofo ny raharaha. Amin'ity tranga iray ity dia toa maty ny olona iray raha nisy fanahy iray naka ny vatana, izay niverina indray. Toa tsy fahita firy ny trangan'ny fitsangatsanganana.
Na dia tsy fahita firy aza, ny tranga an-dàlam-be dia hita taratra ao amin'ny kilalao mihazakazaka, Afaka miandry ny lanitra by Harry Segall, izay natao tao amin'ny filma Tonga eto i Mr. Jordan miaraka amin'i Robert Montgomery, Afaka miandry ny lanitra miaraka amin'i Warren Beatty sy Manetry tena miaraka amin'i Chris Rock.
Ny mariky ny fitsangatsanganana dia maneho fanahy iray manatona vatana alohan'ny hanombohana izany.
Zava-mitranga amin'ny fanambadiana gikan-trano